Taariikhda My Butros » Hamiyeysaa in ximnaha,: Sidee A Good Dog rabbeeyey A Woman Bad
Last updated: Jul. 01 2020 | 2 min akhri
Inkasta oo aan weli ka fog hawlgabka ama decrepitude, Ximnaha, oo aan oo u dhowaanin xagaaga magaalo nugul mawjadaha kulaylka, halkaas oo hawo nagu hayaa nool laakiin waxaa laga shaabadeeyey ee aqalka.
Ogaashada sida loo ximnaha gaaray dhinacyada waddooyinka xareysatay iyo inta ay ahaan jirtay tan iyo markii aan Wannu fasax dhab ah, Waxaan is-idhi 'haa’ marka saaxiibka saaxiib ii sheegay oo ku saabsan Long Island xeebta kirada ah si lama filaan ah loo heli karo bisha August.
My saaxiib saaxiibkiis ku soo dhacday jacayl leh nin California, waxaana uu diyaar u yahay inuu iska iloobaan ciid East Coast iyo qaraqmay ee jacaylka ee barafowga San Francisco. Darsatid galay ukunta buulkeedii, Waxaan ka caawisay ka soo.
Waxaan ka dhigi bustaha fiican jaalaha ah aan laga saaray mid ka mid ah noqto carrada ka dul iyo ximnaha, kolkaasuu ku fadhiistay;. Waxaa weli hore, laakiin aan kor u saaray dallada weydey kii cagaarka iyo cadaanka ah mid aan hore usoo helay dhulka hoostiisa iyo hubsataa amiirka yar ahaa si ammaan ah ee ay hadh. Markaas ayaan ku socon biyaha. Kolkaasuu kacay oo raacay. Waxaan siyaadinay. Markii aan kubka qoto dheer ahaa, Ximnaha awdeen oo raadinayay ugu baaqeysaa. Waxaan isaga ku boorriyay u qabtidna. Waxa uu diiday. Dib ayaan isagii soo diray inay bustaha. Waxa uu diiday. Waxaan ka taahay oo wax fiiriyey cirka. Isagu ma aha in i raaca lahaa; uu ku raja weynaa ma sii joogi doono. Waxaan marmar dhif ah ayaa halgan awoodeed oo kan la mid ah, inta badan sababtoo ah waxa uu ahaa sida eey fiican iyo sababtoo ah si cadaalad ah waxaan isaga loola dhaqmo, isagoo u fudud oo aan loo aabo yeelin ee ay gacanta ku jimicsi.
Waxaan noqon lahaa qof eey, ee la soo dhaafay. Laakiin ismari la yeelo Gomadahanaga in biyo la aan si fudud lagu xalin. Waxaan arintii dominatrix ah, dalbanaya in uu sugi on bustaha, wuxuu hoos fadhiyey geedkiisii ​​dallada hadii uu ul lahaa aniga mooyaane in biyaha. Waxa uu dib u tageen inay saldhig guriga. Waxaan gabiga baxay oo keliya. Laakiin din xeebtay dib iga soo. Ximnaha waxaa kor iyo hoos inaan orotonno, Barking. Waxaan u soo baxay oo biyo ah si ay isaga in gacmaha iyo lugaha ayaa gucleynaya u maiktias, ma xaliyo
Waxaan ka dhigay dhaqaaq ka jira dhulka, sida madwoman ah in kastoo aan gabiga ku dhawaad ​​libdhay araggiisii, Waxaan si Firma Terra iyo u celin lahaa: Waxaan marna aad ka tegi doonaa. Waxaan marna aad ka tegi doonaa. Ma ximnaha, i rumee. Samatabbixinta ee loo baahan yahay. Tani waxa looga baahan yahay kor u orotonno Waxaana ku hoos xeebta iyo dugaaggu ka dhex ciyaan inay soo ururiyaan ciidamada. Haddii aan gabiga, uu baryin,; haddii aan ka baxay biyaha, ayuu hoos u dhig buste ah sida eey oo wanaagsan.
Waxay ahayd maalin aad u kulul. Cadhooday waxaan ka helay. Raaxo waxaan ka helay. Waxaan halis. Waxaan isaga siiyey buskud iyo muxaadarooyin iyo sameeyey badan oo ballanqaadyo. Wax soo shaqeeyay. Waxaan dib u biyo galeen iyo inuu dib u tageen inay qaylodhaan ilaa, cabsi ah in guriga lagaa saaro ay dadka kale ku riyaaqayaa maalinta xeebta, Guriga ayaan isaga qaaday. Maalmaha ku xiga, Waxaan isku dayay inuu ka tago kooxda ee gaariga la daaqadaha si ammaan ah hoos u halka anna waxaan ku tegey dabaal, laakiinse isagu halkaas diirteen, aad u culus, argagax-dhufatay jilif waxaan halka, jacaylka naftiisa, galeen biyaha iyo horyimaad waxa uu sii waday in ay rumaysan tahay waxay ahayd dhimashada gaar ah. Ugu dambayntii, uu lahaa inuu sii joogo ka danbeeya in guriga kirada, xitaa maalmaha ugu shidan, iyadoo dhamaan taageerayaasha dabaqa isaga oo berkedda, hadii aan doonayo dabbaasha. Waxaan gaadhay khilaaf ugu horeysay ee halis ku jira u xigay kaamil ah, our aqoonsi ugu horeysay in waari doonaan nimco ma ahaayeen mar walba uu, ama anigaa. Labada ciyaaryahan dynamic laga yaabaa, at times, waddooyin gaar ah si ay u Khary.